FAQ – Welcome to Eden Centre Organization
မသန်စွမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ
မေး-၁။ မသန်စွမ်းကလေး၊ အထူးသဖြင့်ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းကလေးများကို ဘယ်လိုစာသင်ပေးသလဲ။ အထူးပညာရေးဆိုတာဘာလဲ။
ဖြေ-၁။ မသန်စွမ်းကလေး၊ အထူးသဖြင့်ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းကလေးများကိုပညာသင်ပေးခြင်းသည် အခြား ကလေးများ ကျောင်းတွင်သင်ကြားနေကြသော အတန်းစာကိုသင်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင်ယူနိုင်မှုနှင့် သင်ယူနိုင်စွမ်းမတူကြသော သင်ယူသူတိုင်းအတွက် သူတို့၏သင်ယူနိုင်စွမ်းအပေါ်၊ ၀ါသနာပါသည့် ဘာသာရပ်များကို သင်ပေးခြင်းသည် အထူးပညာရေးပင်ဖြစ်ပါသည်။
ကလေးတိုင်းသင်ယူနိုင်စွမ်းရှိနေကြပါသည်။ လိုအပ်နေသည်မှာ သင်ယူသူတစ်ဦးချင်းစီ၏လိုအပ်နေ သောသင်ကြားနည်းကိုသိရှိရန်နှင့် ၄င်းတို့သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိသည့်အတိုင်းအကောင်းဆုံးကြိုး သက်ဆိုင် ရာကျွမ်းကျင်သူများမှ ကြိုးစားပြီးသင်ပေးရန်သာလိုပါသည်။ ကလေးတိုင်းပုံမှန်ကြီးထွားနေကြပါသည်။ ထိုသို့ကြီးထွားမှုကို သူကဏ္ဍနှင့်သူ တိုင်းတာနိုင်ပါသည်။ ထိုကဏ္ဍတစ်ခုခြင်းစီတွင် ပုံမှန်တိုးတက်မှု မရှိပါက ထိုအားနည်းနေသောကဏ္ဍ ကိုအလေးပေးပြီး တိုးတက်ရန်လုပ်ပေးခြင်း၊ သင်ပေးခြင်းကို အထူးပညာရေးဟုခေါ်ပါသည်။
မေး-၂။	ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ပေးတာ သာမန်ကလေးပြန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ဘာကြောင့်လိုအပ်ပါသလဲ။
ဖြေ-၂။ မသန်စွမ်းကလေးများကို ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် သာမန်ကလေး ပြန်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သို့သော် လိုအပ်နေသောလေ့ကျင့်ခန်းများကို အချိန်မီစနစ်တကျလုပ်ပေးနိုင်ပါက မသန်စွမ်းကလေးဟာ သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့်ထိရောက်လွယ်ကူစွာပြုလုပ်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာ သာမန်ကလေးပြန်ဖြစ်စေလိုလို့မဟုတ်ပါဘူး။ မသန်စွမ်း ကလေးဖြစ်ခြင်းဟာ ကျား/မဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့ အနေအထားတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ထိုအနေအထားကို တော့ ပြောင်းလဲပေးလို့မရတော့ပါဘူး။
လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဟာ အားကစားသမားများကျွမ်းကျင်မှုရှိလာအောင်အမြဲလေ့ကျင့်ပေးရန်လို အပ်သလိုဘဲ တစ်နည်းအားဖြင့် အားကစားသမားတစ်ယောက်အနေဖြင့် မလေ့ကျင့်ဘဲပြိုင်ပွဲမဝင်နိုင် သလို မသန်စွမ်းသူများလည်း လိုအပ်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းများမလုပ်ဘဲနဲ့ နေစဉ်လှုပ်ရှားမှုအတွက် သွက်လက်ပေါ့ပါးစွာလှုပ်ရှားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများ ကို မသန်စွမ်းကလေးတိုင်း အချိန်မီ၊ စနစ်တကျရရှိနိုင်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
မေး-၃။	ချို့ယွင်းချက်ရှိခြင်းနှင့် မသန်စွမ်းမှု တူပါသလား။ ဘာကွာသလဲ။
ဖြေ-၃။ ချို့ယွင်းမှုရှိနေခြင်းနှင့် မသန်စွမ်းမှု ဟာလုံးဝမတူပါဘူး။ အဖြူနှင့်အမည်းလို ကွာခြားပါတယ်။
ချို့ယွင်းချက်ရှိတယ်ဆိုတာဟာ လူသားတစ်ဦးတစ်ယောက်မှာရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အ ပိုင်းတစ်ခုခု ထင်သာမြင်သာ ချို့ယွင်းနေခြင်း၊ ဟာနေခြင်း၊ အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းတို့ ရေရှည်ရှိနေခြင်း ကိုခေါ်ဆိုပါသည်။ ပြောင်းလဲ၍မရပါ။ အမြဲရှိနေပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ချို့ယွင်းချက်ရှိနေခြင်းသည် တစ်ဦးချင်းစီနဲ့သာပတ်သက်နေသည့် ကျန်းမာရေးပြသနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
မသန်စွမ်းမှုသည် ကိုယ်အင်္ဂါချို့ယွင်ချက်ရှိနေသူ မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးသည် ရုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားများ၊ အဆင်မပြေသောစနစ်နှင့် လူသားများသတ်မှတ်ကျင့်သုံးနေသော ထုံးတမ်းစဉ်လာစသည့် အမျိုးမျိုးသောအတားအဆီးများကြောင့် မိမိရသင့်ရထိုက်သော၊ လက်လှမ်းမီ နိုင်သော၊ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သော အခွင့်အရေးကို မရရှိနိုင်ဘဲဆုံးရှုံးနေသည့် မတရားမှုအခြေအနေ၊ အနိုင်ကျင့်နေသောအခြေအနေ၊ အဖိနှိပ်ခံနေသောအခြေအနေ တစ်နည်းအားဖြင့် မည်သို့မှ လက်ခံ၍ မရသည့် မဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်သောအခြေအနေတို့ကို ခေါ်ဆိုပါသည်။ မသန်စွမ်းမှုသည် အခြေအနေ တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အမြဲပြောင်းလဲနိုင်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် မသန်စွမ်းမှုသည် လူမှုရေးပြသနာ တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့်သာ အထိရောက်ဆုံးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အခြားနည်းလမ်းမရှိပါ။
မေး-၄။	မသန်စွမ်းမှုအမြင်ဟောင်းဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ။
ဖြေ-၄။ မသန်စွမ်းမှုအမြင်ဟောင်း (ရိုးရာအမြင် သို့မဟုတ် ဆေးဖက်ဆိုင်ရာအမြင်) ဟူသည်မှာ မသန်စွမ်းသူ တစ်ဦးမှ အခြားသူများကဲ့သို့အခွင့်အရေးတန်းတူမရနိုင်ခြင်းသည် ဖြစ်သင့်ပါသည်။ ထိုသို့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးခြင်းသည်လည်း ရှိနေရပါမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသူသည် မိမိတွင်ရှိနေသော ချို့ယွင်း ချက်၏သားကောင်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဟု သတ်မှတ်ထားသည့် အယူအဆဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအား ဖြင့် မသန်စွမ်းသူသည် သာမန်မဟုတ်၊ လူစဉ်မမီဟုသတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မသန် စွမ်းသူကို ဆေးပညာအားဖြင့် သာမန်ဖြစ်လာသည့်အထိကုသပေးရန်လိုသည် သို့မဟုတ် သနားပြီး စောင့်ရှောက်ပေးရန်လိုသည်ဟု လက်ခံနေခြင်းကို အမြင်ဟောင်းဟုခေါ်ဆိုပါသည်။
ချို့ယွင်းချက်ရှိခြင်း = မသန်စွမ်းမှုရှိ (တစ်ဦးချင်းနှင့်သာဆိုင်သည့် ကျန်းမာရေးပြသနာ၊ ကံဆိုးမှုဖြစ်)
ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်း = သာမန်ဖြစ်လာရန်ကုသ (ပြန်လည်ထူထောင်)ပေးခြင်း၊ စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း
မေး-၅။	မသန်စွမ်းအမြင်သစ်ဆိုတာကော ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ။
ဖြေ-၅။ မသန်စွမ်းမှုအမြင်သစ် (လူမှုရေးအမြင်ပုံစံ) ဟူသည်မှာ မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးမှ အခြားသူများကဲ့သို့ အခွင့်အရေးတန်းတူမရရှိနိုင်ဘဲ အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေခြင်းသည် ထိုသူ၏ကိုယ်ခန္ဒာတွင်ရှိနေသောချို့ ယွင်းချက်ကြောင့်မဟုတ်။ ထိုမသန်စွမ်းသူအတွက် အဆင်ပြေစေရေးကို လုံးဝထည့်သွင်းစဉ်းစားထား ခြင်းမရှိသောကြောင့် မသန်စွမ်းသူအနေဖြင့် အတားအဆီးအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်နေရပြီး မစွမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်သွားရခြင်း (မတရားခံနေခြင်း၊ အဖိနှိပ်ခံနေခြင်း၊ အစော်ကားခံနေခြင်း၊ အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေခြင်း) ဖြစ်သည်ဟု ယူဆခြင်းကို ခေါ်ပါသည်။
ချို့ယွင်းချက်ရှိခြင်း + အတားအဆီး = မသန်စွမ်းမှုရှိ (လူမှုရေးဆိုင်ရာပြသနာဖြစ်သည်)
ခြေရှင်းမည့်နည်းလမ်း = နိုင်ငံရေးအရ မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်၊
သေခြာစေမည့် ဥပဒေများပြဌာန်းခြင်း၊ မူဝါဒများချမှတ်ခြင်း။
မေး-၆။	ယနေ့မသန်စွမ်းသူများရဲ့အလိုအပ်ဆုံးက ဘာဖြစ်မလဲ။
ဖြေ-၆။ ယနေ့မသန်စွမ်းသူများရဲ့အလိုအပ်ဆုံးအရာဟာ လူ့သိက္ခာနှှုင့်သာတူအခွင့်အရေးရရှိရန်ဘဲဖြစ်ပါ တယ်။ သူတို့ရဲ့သူသားဖြစ်ခြင်းကို အခြားသူများကတန်ဖိုးထားရိုသေပေးပြီး လူတိုင်းကဆက်ဆံပေးနိုင် ကြမယ်ဆိုရင်တော့ သူဆို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝဟာ သိက္ခာရှိရှိနဲ့နေထိုင်အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မသန် စွမ်းသူများရဲ့မွေးရာပါလူ့အခွင့်အရေးရှိနေမှုကို သိရှိလက်ခံပေးပြီး ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ အလုပ်အကိုင် စသည့် လူ့ဘဝနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အများနည်းတူအခွင့်အရေးရရှိနိုင်ကြစေရန် အားလုံးမှဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပါက မသန်စွမ်းသူများသည်လည်း အခြားနိုင်ငံသားများကဲ့သို့ မိမိတို့တိုင်းပြည် နှင့်လူမျိုးအတွက် တာဝန်ကျေနိုင်သော၊ တာဝန်ခံ၊ တာဝန်ယူန်ိုင်သောနိုင်ငံသားများ ဖြစ်လာကြပါမယ်။
မေး-၇။	မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးကို ‘သနားတာ’ နဲ့ ‘ကိုယ်ချင်းစာ’ တာဘာကွာသလဲ။
ဖြေ-၇။ သနားတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်လောက်မလုပ်နိုင်သူ၊ ကံမကောင်းသူ၊ ဆုံးရှုံးနသူတွေအပေါ်မှာထားတဲ့လူ သားများ၏ ကူညီချင်သောစိတ်ထားဟုပြောရင်မှားမယ်မထင်ပါ။ သနားစိတ်ရှိနေတာကို လုံးဝမှား တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါ။ ယင်းစိတ်ထားများရှိနေရန်လည်းလိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုတာ အခြားလူသားတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားနေတဲ့ ဝမ်းနည်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ ဆုံးရှုံး ခြင်းစသည်တို့ကို ကိုယ်တိုင်ခံစားသကဲ့သို့ ထိုသူ၏နေရာတွင်နေပြီးခံစားပေးခြင်းဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာ သောစိတ်ထားကိုဆိုလိုပါသည်။
ဥပမာ-လူတိုင်းအသုဘအိမ်သွားပြီး ဝမ်းနည်းသောသူနဲ့အတူဝမ်းနည်းကြောင်းပြသရန် အသုဘအိမ် သွားဘူးကြမှာပါ။ ယင်းသို့သွားလည်ချိန်တွင်ခံစားရသည့် ခ့စားချက်စိတ်ထားများသည် သနားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍မိမိချစ်ခင်ရင်းနှီးသော သားသမီး၊ မိသားစုဝင်များသေဆုံးပြီးနောက်မကြာမီ အသုဘအိမ်သွားစရာပေါ်ခဲ့မည်ဆိုပါက ယခင်အသုဘအိမ်သွားသည့်အချိန်ခံစားချက်စိတ်ထားနှင့် ယခုခံစားတဲ့ခံစားချက် စိတ်ထားတူမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင် မိသာစုတစ်ဦးဦးသေးဆုံးခြင်း ကို လောလောလတ်လတ်ခံစားသူ၏ ခံစားချက်သည် ကာယကံရှင်မိစားစုများနှင့်အတူ ကိုယ်ချင်းစာ ပြီးခံစားပေးနေပါမည်။ အသုဘအိမ်သွားတာခြင်းအတူတူဖြစ်သော်လည်း ခံစားချက်မတူနိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့်မသန်စွမ်းသူများအား သနားခြင်းထက် ကိုယ်ချင်းစာပြီး မျှဝေခံစားပေးပြီးမှသာ ကူညီ လုပ်ပေးရန်။ ဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုပါသည်။
မေး-၈။	အထူးပညာရေးစနစ် (Special Education system) နဲ့ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးစနစ် (Inclusive Education system) ဘာကွာခြားသလဲ။
ဖြေ-၈။ အထူးပညာရေးစနစ်သည် အမျိုးအစားတူသောချို့ယွင်းချက်ရှိသူ မသန်စွမ်းသူများအားစုစည်း ပြီး သီးခြားခွဲထုတ်ကာ၊ အခြားသင်ယူသူများနှင့်မရောဘဲ သူတို့နှင့်သင့်တော်သော သင်ကြားနည်စနစ်ဖြင့် ပညာသင်ပေးသောစနစ်ကို ခေါ်ပါသည်။
လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးစနစ်ဆိုသည်မှာ မသန်စွမ်းကလေးများအပါအဝင် အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် ပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးသောသူများအားလုံး မွေးရာပါပညာသင်ယူခွင့်ကိုရရှိခံစားနိုင်ရန်အတွက် ပညာသင်ကြားသည့်အဆင့်တိုင်းတွင် အခြားပညာသင်ကြားသူများနှင့်အတူပညာသင်ယူခွင့်ရရှိနိုင်ရန် ကြိုးစားသည့်ပညာရေးစနစ်ကိုခေါ်ပါသည်။
လူသားများ၏မွေးရာပါပညာသင်ယူခွင့်ကို မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မျှငြင်းပယ်၍မရပါ။ သင်ယူ သူတိုင်း၏ သင်ကြားမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့် ဆည်းနိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းသည် လူသားတိုင်း လုပ်ရမည့်အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။
မေး-၉။	မသန်စွမ်းသူများ၏ လူမှုရေးကိစ္စဆောင်ရွက်တာနဲ့ သူတို့၏အရေးကိစ္စဆောင်ရွက်တာ ဘာကွာပါ သလဲ။
ဖြေ-၉။ မသန်စွမ်းသူများ၏လူမှုရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းဟူသည်မှာ မသန်စွမ်းသူတွေလိုအပ်နေသော အကူ အညီများကို အတတ်နိုင်ဆုံးပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အဝတ်မရှိသောသူများ၊ နေအိမ်မရှိသောသူများ၊ စာငတ်နေသော၊ ပညာမတတ်သော၊ အလုပ်အကိုင်မရှိသော မသန်စွမ်းသူ များအတွက် လိုအပ်သောအရာများကိုဖြည့် ဆည်းပေးရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ်သလို အရေးလည်းကြီးပါသည်။
မသန်စွမ်းသူများ၏အရေးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုသည်မှာ မသန်စွမ်းသူများဆုံးရှုံးနေသောအခွင့် အရေးများ၊ ဂုဏ်သိက္ခာများ အခြားသူများကဲ့သို့ရရှိပြီး ကိုယ်ကံကြမ္မာကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်အောင် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
ဥပမာ – အင်္ဂလိပ်အစိုးရက မြန်မာပြည်ကို ကိုလိုနီပြု၊ ကျွန်ပြုပြီးအုပ်ချူပ်ခဲ့စဉ်က မြန်မာပြည်အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သောလုပ်ငန်းများအားလုံး (ပညာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အဆောက်အဦး အစရှိသည်များ) သည် မြန်မာပြသူများ၏လူမှုရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အင်္ဂလိပ်အစိုးရကမြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရရှိြပြီး ကိုယ့်ကံကြမ္မာကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလာနိုင်ရန်အ တွက် တစ်နည်းအားဖြင့် မြန်မာပြသူများ၏အရေးကိစ္စအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း လုံးဝမရှိခဲ့ပါ။ မြန်မာပြသူများ၏အရေးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သူများမှာ ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးဝင် မိမိအမည်ရှေ့တွင် သခင်တပ်ရဲသော မြန်မာလူငယ်များကသာ မြန်မာပြည်သူများ၏အရေးကိစ္စကို အပြည့်အဝဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ကြပါသည်။
ယနေ့မြန်မာပြည်သားမသန်စွမ်းသူများအတွက် သူတို့၏လူမှုရေးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုအပ်သ လို မသန်စွမ်းသူများ၏အရေးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးရန်လည်း အထူးလိုအပ်လျက်ရှိနေပါသည်။ မသန် စွမ်းသူများအတွက် လုပ်ဆောင်နေသောသူများ၏ ရွေးချယ်မှုသာ မှန်ကန်ဖို့လိုပါသည်။
မေး-၁၀။ မသန်စွမ်းသူလူငယ်တစ်ဦးကို အကြံပေးပါဟုတောင်းဆိုလာပါက ဘယ်လိုအကြံပေးသင့်ပါသလဲ။
ဖြေ-၁၀။ မသန်စွမ်းလူငယ်တစ်ဦးကို အကြံပေးခွင့်ရပါက ကျွန်တော်ပေးလိုသောအကြံမှာ မိမိဘဝ၊ မိမိ၏ လူသား ဖြစ်ခြင်းအနေအထားကို လက်ခံပြီး၊ မိမိ၏လူသားဖြစ်ခြင်းကို တန်ဖိုးထားရန်၊ ဂုဏ်ယူနိုင် သောသူဖြစ်ရန် အကြံပေးပါမည်။ လွန်စွာမှ ရတောငင့်ရခဲဖြစ်သော မိမိ၏လူသားဖြစ်ခြင်းဘဝကို ကာယကံရှင်မိမိကိုယ် တိုင်က တန်ဖိုးထားမှသာ အခြားသူများကလည်း တန်ဖိုးထားပြီး လက်ခံ လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ယနေ့မသန်စွမ်းသူများအတွက် အလိုအပ်ဆုံး သော အကြံပေးခြင်းသည် စိတ်ဓါတ် မြှင့်တင်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိ၏ဘဝကိုတန်ဖိုးထားပြီး စိတ်ဓါတ်မြင့်မားနေသောသူမျာကသာ ဘဝ တူမသန်စွမ်းသူများအတွက် အလုပ်အကျွေး ပြုနိုင်သူဖြစ်ပါမည်။
မှတ်ချက်။ အများပြည်သူများမှ မသန်စွမ်းသူများ၊ မသန်စွမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စများအတွက် မေးမြန်း လိုသောမေးခွန်းများရှိပါက မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံ
မှ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီး ဖြေသွားပါမည်။ မေးမြန်းကြရန်လည်း တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
What is special education? How do you teach children with disabilities?
Rehabilitation can heal disabilities and/or impairment or not? Why it is necessary?
Could you differentiate ‘Impairment’ and ‘Disability’?
What is old ‘understanding of disability’ or ‘Medical Model of Disability’?
What it means ‘New understanding of Disability’ or ‘Social Model of Disability’?
What is the most need for disabled person at present?
What is the different of ‘Pity’ and ‘compassion’ towards disabled person?
What is the different of ‘Special Education system’ and ‘Inclusive Education system’?
What is the different of doing welfare for disabled people and doing affair of disabled people?
What should be your advice if adult disabled person ask you to give advice?